ှScarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) - Hello Sayarwon
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ကဘာလဲ။
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းသည် တစ်ချို့လူများ၌ လည်ချောင်းနာပြီးနောက် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖျားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Scarlatina ဟုလည်းခေါ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံး နီးပါးတွင် အနီတောက်တောက် အကွက်များထခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းမှာ များသောအားဖြင့် လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် အပြင်းဖျားခြင်းတို့ဖြင့် တွဲတတ်ပါသည်။
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းသည် ကလေး ၅ – ၁၅ နှစ်အတွင်း အဖြစ်များဆုံးပင်။ ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက် ဖျားခြင်းကို ကလေးဘဝအပြင်းဖျားနာအဖြစ် ယူဆကြပြီး ပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် အန္တရာယ်နည်းစေနိုင်ပါသည်။ မကုသပဲထားပါက ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းမှ ပိုပြင်းထန်းသောအခြေအနေများဖြစ်လာပြီး နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်နှင့် တခြားအစိတ်ပိုင်းများကိုပါ ထိသွားနိုင်သည်။
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံးဆိုသော်လည်း လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ-
အနီအဖုများထခြင်း – အဖုများသည် နေလှောင်ဒဏ်ရာနှင့်တူပြီး ကော်ပတ်ကိုကိုင်ရသလို ခံစားရသည်။ စံအားဖြင့် မျက်နှာ လည်ပင်းမှစပြီး ကိုယ်ထည် ခြေ လက်တို့ကို ပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နီမြန်းနေသောအရေပြားကိုဖိကြည့်လျှင် အရောင်ဖျော့သွားသည်ကို တွေ့ရ၏။
အနီစင်းကြောင်းများ – ပေါင်ခြံ၊ ချိုင်း၊ တံတောင်၊ ဒူးနှင့် လည်ပင်းတို့မှ အရေပြားတွန့်ခေါက်ရာများတွင် အဖုများထက်ပိုနီသော အစင်းများထခြင်းဖြစ်နိုင်၏။
မျက်နှာပူနေခြင်း – ပါးစပ်တွင် အရောင်ဖျော့နေသော အကွင်းနှင့်အတူ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပူနေတတ်သည်။
စတော်ဘယ်ရီရောင်လျှာ – လျှာတွင် နီထွေထွေးနှင့် အဖုလေးများရှိနေတတ်သည်။ ရောဂါအစောပိုင်းတွင် လျှာပေါ်၌ အဖြူရောင်အလွှာအုပ်နေတတ်၏။
မျက်နှာနှင့်လျှာမှအဖုနှင့်နီမြန်းမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ပတ်ခန့်ကြာတတ်သည်။ အထက်ပါလက္ခဏာများ ပျောက်ကင်းသွားပြီးနောက် အဖုထထားသောအရေပြား ကွာကျသွားပါမည်။
တခြားသော ဆက်စပ်လက္ခဏာများ –
အဖျား ၃၈စင်တီထက်ပိုခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း
လည်ချောင်အလွန်နာခြင်း နီခြင်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဖြူရောင် အဝါရောင်အကွက်များထခြင်း
လည်ပင်းမှ ပြန်ရည်ကျိတ်များကြီးပြီး ထိလိုက်လျှင်နာခြင်း
အဖျား ၁၀၂ ဖာရင်ဟိုက် (၃၈.၉ စင်တီဂရိတ်) နှင့်အထက်
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းမှာ စထရပ်လည်ချောင်းနာခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းတွင် ဘက်တီးရီးယားမှ အဆိပ်ထုတ်၏။ ထိုအဆိပ်ကြောင့် အနီအဖုများထခြင်း လျှာနီခြင်းတို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ပိုးသည် တစ်ဦးမှတစ်ဦး နှာချေစဉ် ချောင်းဆိုးစဉ်မှထွက်သော အစက်များမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါပိုးဝင်စမှ အဖျားစချိန်ထိကြာချိန်မှာ ၂ – ၄ရက်သာ ကြာပါသည်။
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများမှာ – ကလေးအသက် ၅-၁၅ နှစ်သည် တခြားသူများထက် ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးပင်။ အဖျားပိုးသည် အနီးကပ်နေထိုင်သူများဖြစ်သော မိသားစုတွင်း အခန်းဖော်များအတွင်း အလွယ်တကူပျံ့နှံ့တတ်ပါသည်။
Sscarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသပ်စဉ်တွင် ဆရာဝန်မှ –
ကလေးလည်ချောင်း၊ အာသီးနှင့် လျှာအခြေအနေတို့အား ကြည့်ရှု့ပါလိမ့်မည်။
ကလေးလည်းပင်းတွင် ပြန်ရည်ကျိတ်များကြီးမကြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
အဖုအကွက်များ၏ပုံစံနှင့် အရောင်ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
ဆရာဝန်သည် စထရပ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သံသယရှိပါက အာသီးနှင့် လည်ချောင်းနောက်ပိုင်းအား ဂွမ်းစနှင့်တို့ကာ နမူနာစုပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ပါလိမ့်မည်။
စထရပ်ဘက်တီးရီးယားကိုစစ်ဆေးခြင်းက အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော တခြားသောအခြေအနေများကလည်း ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်းလို လက္ခဏာများကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး တခြားသောကုထုံးများကို လိုကောင်းလိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စထရပ်ဘက်တီးရီးယား မတွေ့ဘူးဆိုပါက တခြားသောအချက်များကို ရှာရမည်ဖြစ်သည်။
Scarlet fever ( ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ ပဋိဇီဝဆေးများ အရည်များကို ၅ရက် သို့မဟုတ် ၁၀ ရက်ကြာသောက်ရန် ပေးပါလိမ့်မည်။ သင်ရော သို့မဟုတ် ကလေးရော တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ကောင်းလာသလို ခံစားရပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဆေးကို အကုန်သောက်ရမည်မှာ အရေးကြီးပါသည်။
ပါရာစီတမော သို့မဟုတ် အိုင်ဗျူပရိုဖိုင်များကို အဖျားတက်လျှင် မအီမသာခံစားရလျှင် သောက်နိုင်ပါသည်။ (အသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကို အက်စ်ပရင်မပေးရပါ။)
ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ကြက်သွေးရောင်အဖုပေါက်ဖျားခြင်း ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဖျားနှင့် နာကျင်မှုကိုကုပါ – ibuprofen (Advil, Children’s Motrin, others) or acetaminophen (Tylenol) တို့ကိုသုံးပြီး အဖျားနှင့် လည်ချောင်းနာမှုကိုထိန်းပါ။ အရည်များများသောက်ပါ။ ကလေးအား လည်ချောင်းစိုစွတ်ပြီး ရေဓါတ်မခမ်းစေရန် ရေများများတိုက်ပါ။
ဆားငံရည်နှင့်ပလုတ်ကျင်းပါ – ကလေးပလုတ်ကျင်းတတ်လျှင် ဆားငံရည်နှင့်ကျင်းခိုင်းပြီး ထွေးခိုင်းပါ။ ထိုမှ လည်ချောင်းနာမှုကို သက်သာစေပါသည်။ လေထုကို စိုစွတ်အောင်လုပ်ပါ။ ခြောက်သွေ့သောလေသည် လည်ချောင်းနာခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
ငုံဆေးပြားများတိုက်ပါ – အသက် ၄ နှစ်အထက် ငုံ့ဆေးစုပ်တတ်သောကလေးများကို လည်ချောင်းနာခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။
သက်သာသောအစာများကိုပေးပါ။ စွပ်ပြုတ်နှင့် အအေးများသည် လည်ချောင်းနာမှုအား သက်သာစေပါသည်။ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းအောင် လည်ချောင်းကိုစပ်စေသည့်အရာများ ကင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/scarlet-fever/basics/lifestyle-home-remedies/con-20030976. Accessed June 30, 2017.
http://www.nhs.uk/conditions/scarlet-fever/pages/introduction.aspx. Accessed June 30, 2017.
(Learn about scarlet fever. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)